ဘယ်သူမှမစကြသေးလို့ပါ။- စာမျက်နှာ2— MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော်ကတော့ အဲလိုတွေမလုပ်တတ်ဘူး။ ရိုးရိုး user အနေနဲ့ ဘာတွေကူညီလုပ်ပေးနိုင်ပါသလဲ။
စောစောက တစ်စောင်ရေးသေးတယ်။ ဘယ်နေရာရောက်နေလဲမသိဘူး။ ဒီကဏ္ဍမှာ ရိုးရိုး user အနေနဲ့ ဘာတွေကူညီနိုင်မလဲ ။ တတ်နိုင်တာမှန်သမျှ ကူညီချင်ပါတယ်။
အစ်မ စမ်းရေ ရေကူညီမယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာမိပါတယ်။ မကူညီခင် ဘယ်လို ကူညီရမလဲဆိုတာ အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ နေရာလေးမှာအရင်ဖတ်ကြည့်ပါဦးဗျာ။
အပေါ်ကလင့်ခ် http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php?t=356 ကူညီနိုင်မယ်ဆိုအကြောင်းပြန်ပါဦးနော်။
ဟုတ်ကဲ ။့စမ်းရေကူနိုင်ပါတယ်။Excel ဖိုင်တေ ွကိုဘယ်မှာဒေါင်းရမှာလဲ ဆိုတာပြန်ပြောပြပေးပါလား။
ကိုညမီးအိမ်ပေးထားတဲ့လင့်ခ် ကဒေါင်းလို ့မရလို ပါ့။ စာပြန်တာနောက်ကျတဲ ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။အရေးပေါ်ကိစ္စလေးပေါ်လာလို ့ပါ။
[email protected] ပါ။
အစ်မစမ်းရေ ရေ http://ifile.it/lg5mp7n/a-z.xls ဒီကနေဒေါင်းလုပ်ဆွဲကြည့်ဦးဗျ။ မရရင်ထပ်ပြောပေါ့။ ကျွန်တော်တခြားနေရာကနေပြန်တင်ပေးပါ့မယ်။ ကူညီမယ်ဆိုလို့ကျေးဇူးပါ။ အစ်မကူညီမယ်ဆို b,d,e&fကိုကူရိုက်ပေးပါလားခင်ဗျ။ ကျေးဇူးပါနော်။
ကိုအီးယောင်ဝါးရေ ဒီလိုဗျ အစ်ကို Excel ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးသွားပြီမလားဗျ။ အဲဒီထဲမှာ ကျွန်တော်တို့အရင် အစ်ကိုတွေအစ်မတွေရိုက်ပြီးသားရှိတယ်။ အဲဒါက စာလုံးတွေသိပ်မစုံသေးလို့ အခုထပ်မံ ဖြည့်နေတာပါ။ အစ်ကိုအခုဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုရင် အဲဒီ Excel ဖိုင်ထဲမှာ ရိုက်ပြီးသားစာလုံးတွေရှိတယ်ဗျ။ အစ်ကို့မှာရှိတဲ့ dictionary နဲ့လိုနေတဲ့စာလုံးတွေကိုရိုက်ထည့်ပြီးကူညီပေးရုံပါပဲ။ ကူညီမယ်ဆို အကြောင်းပြန်ပါဦးနော်။ မရှင်းသေးရင်ထပ်မေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
ပြန်ဖြေပေးနေတာ ကျေးဇူးပဲ ကိုညမီးအိမ်ရေ။
excel ဖိုင်တော့ ရပါပြီ။ ခုလုပ်ရမှာက အဲဒီထဲကို လိုနေတာ ထပ်ဖြည့်ရမှာပေါ့။ ခက်တာက အိမ်မှာ ခုရှိတဲ့အဘိဓာန်က မြန်မာလို မပါဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘာသာလည်း မပြန်တတ်ဘူးရယ်။ ဘယ့်နှယ်ရှေ့ဆက်ရမလဲ ? ကူညီချင်ပါတယ်ရှင့်။
b ရေးနေပါပြီ။မနေ ့ကအလုံး၃၀၀ပဲပြီးတယ်
မအီးယောင်ဝါး( ရှင့်လိုသုံးထားလို့ вЂњမвЂќ တတ်ခေါ်လိုက်တာပါ။)ရေ ကျေးဇူးပါဗျာ ကူညီချင်ပြီးကူညီလို့မရဘူးဆိုလဲ ရပါတယ် ကူညီချင်တယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
အစ်မစမ်းရေ စာလုံး ၃၀၀ တောင်ပြီးတယ်ဆိုတော့ ညမအိပ်ပဲထိုင်ရိုက်နေလားမသိ။ အဲလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ ကျန်းမားရေးထိခိုက်နေပါဦးမယ်။
အကိုပေးထားတဲ့ link ကိုတော့ down လိုက်ပြီ။
ဥပမာ- c လိုရင် c ထဲမှာထည့်ရိုက်ရမှာလား??
ဟုတ်ကဲ့ကူညီမယ်ဆိုတော့ အရမ်းဝမ်းသာတယ်ဗျာ။ t, u, v & w ရိုက်ပေးပါလားဗျာ။ အစ်ကိုဥပမာပေးထားတဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
a - complete ကိုgipsy(ပြည့်စုံ)
d - မစမ်းရေ
e - မစမ်းရေ
f - မစမ်းရေ
g - complete ကိုgipsy(ပြည့်စုံ)
i - ကိုတာယာ
k - ကိုဘီဟုတ်
l - ကိုဘီဟုတ်
m - ကိုဘီဟုတ်
n - ကိုဘီဟုတ်
o - ကိုဘီဟုတ်
p - ကိုဘီဟုတ်
r - ကိုတာယာ
y - ကိုတာယာ
z - ကိုတာယာ
ကိုတာယာ, ကိုဘီဟုတ် နှင့် မအွန်စောတို့ ဘာမှအကြောင်းမပြန်တော့ မအားတော့ဘူးထင်တယ်။ ဒါဆိုအစ်ကိုအစ်မတို့ရဲ့စာလုံးကိုကျွန်တော်လွှဲယူလိုက်တော့မယ်နော်။ တွေ့ရင်အကြောင်းပြန်ကြပါဦးဗျာ။
ma onsaw ခုသီတင်းကျွတ်ပြီးအောင်လုပ်မယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါ မအွန်စောရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မအားတဲ့ကြားက ကူညီပြီး အကြောင်းပြန်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ exam အောင်မြင်ပါစေ
အမ ခရီးထွက်လိုက်ရလို ့နဲ နဲနောက်ကျလိမ့်မယ်ထင်တယ်။sorry ပါနော်။
b - complete မစမ်းရေ
မစမ်းရေမနေ့ကbကိုလှမ်းပို့ထားပါတယ်။
အမပို ့လိုက်တာရှေ ့ပိုင်းလေးတင်ပါ။မစုံသေးပါဘူး။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒါဆိုနောက်အလုံးတွေလဲမရိုက်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောလားဟင် :2:
အမရေ ပြောမှာဖြစ် အပြည့်စုံပြောသွားပေးပါ.....
အနော် တရုတ်ကျောင်း စာမေးပွဲပြီးရင်
အမ စာလုံးတွေကို အနော် ခွဲယူပေးပါမယ်...........
ရပါတယ် ကိုmk ကျေးဇူးပါ။ အစ်ကိုအတွက်အရမ်းများသွားပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်အားရင်အားသလို ရိုက်သွားပါမယ်။ အစ်ကိုရဲ့ကူညီချင်တဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုလေးစားပါတယ်။
လက်သဲခွံလောက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ Excel a-z ဖိုင်ကို
ဒေါင်းထားပြီးပါပီ အိမ်မှာတော့ အင်္ဂလိပ်မြန်မာ အဘိဓာန်
မြန်မာပညာရေး၀န်ကြီးဌာနက ထုတ်တဲ့စာအုပ်တော့ ရှိပါတယ်
နောက်ပြီး ဘယ်စာလုံးတွေကို ခွဲေ၀ ကူညီခွင့်ပေးမလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်
ကူညီမယ်ဆိုတာကြားရလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ဆုံးခန်းတိုင်အောင်ကူညီကြပါနော်။ ကူညီမယ်ဆိုပြီး ပျောက်ပျောက်သွားကြလို့။
မနှင်းဆက်ပိုင် ကူညီမယ်ဆိုရင် ကိုဘီဟုတ်တာဝန်ယူထားတဲ့ n, o and p ကိုကူညီပေးပါ။ သူဖိုရမ်ကိုမလာတာတော်တော်ကြာသွားပြီဗျ။ အဲဒါလေးကူညီပေးပါနော်။
n - မနှင်းဆက်ပိုင်
ဟုတ်ကဲ့ ကူညီခွင့်ရတာကျေးဇူးပါ ချင် ...
ပျော်သွားပါတယ် တန်ဒန်ဒန် :65::65::65:
မစမ်းရေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ မကူညီနိုင်တော့လို့ ဝမ်းနည်းကြောင်းမေးလ်ရောက်လာပါတယ်။ အဲဒီတော့ကူညီပေးနိုင်သူများကူညီပေးကြပါဦး။
ကျွန်တော် ကူညီပေးချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာကိုတော့ သေချာပြောပြပေးပါနော်။
စာမျက်နှာ ၁ ကနေပြန်စဖတ်ကြည့်ပါအစ်ကို။ ကျေးဇူးပါ။
missnn2005 ရေ ကူညီမယ်ဆိုရင် d,e&fရိုက်ပေးပါခင်ဗျ။ တကယ်ကူညီမယ်ဆိုရင်တော့ အကြောင်းပြန်ပါနော်။
MZ Dictionary ရော အသက်ရှိသေးလားဟင်(ဒီလိုပြောလို့ လုပ်သူများစိတ်မဆိုးကြပါနဲ့)
အခုထိဘယ်သူမှ သတင်း အသစ် တင်တာမတွေ့သေးလို့ပါ အားလုံး ရိုက်နေကြပါသလားခင်ဗျား မော်မော်တွေလည်း သိပါတယ် ရိုက်ပေးတဲ့လူတွေ မအားကြဘူးဆိုတာပါ တစ်ယောက်တစ်လုံးခြင်းဆီရိုက်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထ င်တယ် တစ်လုံး ကိုမှအများဆုံး34 ရက်လောက်ပဲကြာပါတယ် ကူညီကြပါခင်ဗျား
(လေးလေးအက်ဒမင် တွေ ဦးဦးမော်မော် တွေ အစားဝင်အော် မိလိုက်တာခွင့်လွှတ်ကြပါခင်ဗျား တကယ်ဖြစ်စေချင်လွန်းလို့ပါ ရိုက်နေသူများပါ စိတ်မဆိုးကြပါ နဲ့နော် ) တကယ်လို့ ဒီ ပိုစ့်က ရန်ဖြစ်စေခဲ့ရင် ဒီ ပိုစ့် ကို ဖျက်ပေးပါ
ငြိမ်းချမ်းနေသော အမ်ဇက် လေးကိုအရောင်မဆိုးရက်လို့ပါ
အခုထိဘယ်သူမှ သတင်း အသစ် တင်တာမတွေ့သေးလို့ပါ အားလုံး ရိုက်နေကြပါသလားခင်ဗျား
အသက်ရှိပါသေးတယ်။အသစ်မတင်ဘူးဆိုတာကတော့ အချို့ တာ၀န်ယူထားတဲ့သူတွေတော့မသိဘူး။
အနော်တာ၀န်ယူထားတဲ့ စကားလုံးအချို့ကိုတော့ အားလုံးပြီးမှဘဲ Reply ပြန်မယ်လို့
တစ်ယောက်တစ်လုံးခြင်းဆီရိုက်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထ င်တယ် တစ်လုံး ကိုမှအများဆုံး34 ရက်လောက်ပဲကြာပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ ကို MK杰 ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဂျစ်ပစီလေးကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ MZ Dictionary က ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲအားမရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ ကို MK ပြောတာမှန်တော့မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဗျာ ကူညီမယ်ပြောပြီး အခုထပ်ထိဘယ်သူမှအကြောင်းမပြန်ကြတော့ဘူး။ အကယ်၍ဆက်လက်မကူညီနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့် အကြောင်းလေးတော့ကြားပေးပါ။ ဆက်လက်မကူညီနိုင်ဘူးဆိုရင်လဲ မစမ်းရေလို မကူညီနိုင်ကြောင်းအကြောင်းကြားပေးပါ။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က စာလုံးတွေထပ်မရိုက်နိုင်တော့ဘူးဗျ။ အခုတစ်လောလုံးဝမအားလို့ပါ။ ကိုယ်တာဝန်ယူတဲ့ကိစ္စ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာတော့သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လုံးဝရိုက်ဖို့အချိန်မရှိလို့ပါ။ ကျွန်တော်အားသွားတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ပြန်ရိုက်ပါ့မယ်။ ကူညီကြသောသူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့သိသွားပြီ ဂျစ်ပစီလေးပြောသလို ကူညီမယ့်လူတစ်ယောက်ကို စာလုံးတစ်လုံးပဲ အကူအညီတောင်းပါတော့မယ်။ စာလုံးတွေများလို့ပျောက်သွားကြတယ်ထင်တယ်။
ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့သိသွားပြီ ဂျစ်ပစီလေးပြောသလို ကူညီမယ့်လူတစ်ယောက်ကို စာလုံးတစ်လုံးပဲ အကူအညီတောင်းပါတော့မယ်။
ဟုတ်တယ် အဲဒီကြောင့်ဖြစ်မယ် ကျွန်တော်လည်း ဒီနောက်ပိုင်းမအားတာနဲ့ ပြန်မကူနိုင်တာဗျို့ အားပါက ပြန်ကူမည်
သားလည်းပါချင်တယ်နော်။ မည်သို့မည်ပုံလုပ်ရမည်ဆိုတာကို လမ်းညွှန်ဆုံးမပေးပါနော်ခင်ညာ။
MZ dic ကဘာတွေပြီးပြီလဲဗျာ.....ကျွန်တော်အလုပ်က ၁ လနားထားပါတယ်...excel file လဲဒေါင်းပြီးပြီး.........ကူုနိုင်တာရှိရင်ပြောပါ
ကိုမောင်ပြုံးရေ ဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာ တော့ပစ်အစကနေဖတ်ကြည့်ပါ ရေးထားပါတယ်။
ကို binary ပြီးသွားတဲ့စာရင်းများကို ကျွန်တော်ကြေငြာထားပါတယ်။ အစ်ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင် D တစ်လုံးတည်းရိုက်ပေးပါ။
ဟုတ်တယ် တစ်လုံးတည်းသာပေးတော့ ပြီးမှပဲနောက်တစ်လုံးပေး အဲဒါမှပေါ့ သို့မဟုတ်ရင် ................
ရေးဖို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျား
ဂျစ်လေးလဲအားနေတယ်မဟုတ်လား တစ်လုံးလောက်ရေးပေးလေး ဟီးဟီး :d
MZ အတွက် ကူညီ ချင် ပါတယ်။ တိုည ကော၊ကူ ညီနေတဲ့ တိုတို ကြီတွေ ကော လေးစာပါတယ်။ ၀င်ပြီလဲကူ ညီချင် ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အနော် mm typing,spelling က တော်တော် နှေး တော်တော်ဆိုးတာကြောင့် ( ကူညီ ချင်ပေ မဲ့ အေ၀း က ပဲ အား ပေးရ တော့ မယ် ။
ဟုတ်ပါတယ် အားနေပါတယ် တစ်နေ့တစ်နေ့ ကွန်ကပိုဆိုးလာတာ ဂျီမေးတောင် မရတော့ဘူး ဆိုင်က customer တွေကိုကူနေရတာနဲ့ ပဲအလုပ်က၇ှုပ်လှပါပြီ ပြီးတော့ ဟိုပြိုင်ပွဲအတွက်လည်း တန်းပလိတ် ကိုအကြီးစား ပြင်ဆင်မူတွေလုပ်နေရပါတယ် ပြီးတော့ php ကိုလေ့လာဖို့ စာတွေရှာနေပါတယ် ပြီးတော့ dreamweaver ကိုကလိတက်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနေပါတယ် ပြီးတော့ ..................
အိမ်မှာလည်း ကွန်ပြူတာမဝယ်နိုင်သေးလို့ ပါ တကယ်လို့ဝယ်ဖြစ်ရင်တော့ ညမင်းသား လုပ်ပြီး ရိုက်ပေးပါ့မယ်ဗျား ..............
နောက် အလုပ်ကလည်း အချိန်ပိုင်းအလုပ်ကနေ အချိန်ပြည့်အလုပ်ဖြစ်သွားတာကြောင့်
မိနှင်း တာ၀န်ယူထားတဲ့ အလုပ်ကြန့်ကြာနေတာစိတ်မကောင်းပါဘူး ...
ဒါပေမယ် တစ်နေ့ကို အေဖိုးတစ်မျက်နှာရှိ စာလုံးရေကတော့ ဆယ်လုံးတောင်မပြည့်မပါဘူး ဟီဟိ အဲ့တာကိုအပြတ်ဖြိ်ုပါတယ် ... :p:p
ဒီကြားထဲမှာ လည်း အလုပ်တွေက ကုလသမဂ္ဂထက်များနေပါတယ် ဆိုတော့ကာ :71::71::71:ဘယ်လောက်ပင်ကြာပင်ငြားသော်လည်း မိနှင်းတာ၀န်ယူထားတဲ့ အလုပ်ကို ပြီးပြတ်အောင် လုပ်မယ်ဆိုတာ လာအသိပေးတာပါ....
အားလုံး အားလုံး လိပ် အဘွားခေါ်ရလောက်အောင်လေးဖင့်တဲ့
မိနှင်း ကို ခွင့်လွတ်ကြပါလို့ ...:((:((:((
ဆူရဘူးနော် .... ဒါဘဲ ဆုပဲပေးရင်ပေး .... မယ်နှေးကွေးဆိုပြီး ခိခိ
ဆူပါဘူးဗျာ :d မအားတဲ့ကြားကကူညီပေးနေတာကိုပဲ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် မယ်မင်မိနှင်းခင်ဗျာ...
ကိုညလေးရေ ပေးရင်လည်း တစ်လုံးပဲပေးတော့နော်
ကိုမိုးမြင့်ရှိန်း မအားတဲ့ကြားကကူညီဦးမယ်ဆိုတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ အစ်ကို ကူညီမယ်ဆိုရင်fလေးကိုရိုက်ပေးပါနော်။
e - ကိုရဲထက်
ဘာများကျန်သေးလဲ ကူညီပါရစေ တတတ်တအားပေါ့ ညကျရင်လုပ်ပေးမယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ...fကိုတာ၀န်ယူလိုက်ပါပြီ......